မြစ်ဆုံ: facebook ကို ဘယ်သူပိုင်ဆိုင်တာလည်း
facebook ကို ဘယ်သူပိုင်ဆိုင်တာလည်း
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသုံးအများဆုံး လူမှုကွန်ယက် ဖေ.ဘုတ် ကို ဘယ်သူပိုင်ဆိုင်သလဲဆိုတဲ.မေးခွန်းကို အားလုံး စိတ်ဝင်းစားကြမှာပါ။ ဖေ.ဘုတ်ကို စဦးတည်ထောင်ခဲ.သူ Mark Zugenburg တစ်ဦးတည်းသာ ပိုင်ဆိုင်မယ်လို. ထင်ပါက သင်၏ ထင်မြင်ချက် လွဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ 24% ရာခိုင်နှုန်းကိုသာ မတ်(က) ပိုင်ဆိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်သော အစုရှယ်ယာများကို မည်သူတွေ ပိုင်ဆိုင်ကြတယ်ဆိုတာ အောက်ကအချက်အလက်လေးတွေကိုလေ.လာကြည်.ရင် သိမည်ဖြစ်သည်။
Elevation Partners (that’s U2′s Bono among others): ~1.5%
Posted by မောင်မောင် at 09:07
လောလောဆယ် Facebook ထဲက
ဟီး ကောင်းတယ် ကောင်းတယ် game ruquest တွေ မရောက်တော.လို. :P